प्रतिष्ठानको आईसियु कक्ष मुख्यमन्त्री पोख्रेलद्धारा उद्घाटन « Online Rapti
प्रतिष्ठानको आईसियु कक्ष मुख्यमन्त्री पोख्रेलद्धारा उद्घाटन
अनलाइन राप्ती २०७७ बैशाख ३१ गते बुधवार
घोराही , दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दिर्घकालीन योजना बनाएर बजेट माग गरे सहयोग गर्न तयार रहेको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले बताए । बुधवार प्रतिष्ठानमा स्थापना भएको दश बेडको नवजात शिशु सघन कक्ष तथा बाल सघन कक्ष (आइसियु ) को उद्घाटन गर्दै उनले सवै खाले विरामीको उपचार दाङमै हुने गरि प्रतिष्ठानलाई विकास गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोख्रेलले त्यसका लागि प्रतिष्ठानले दिर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको समेत बताए । ‘प्रतिष्ठानको विकास लागि योजना बनाएर अघि बढ्नुहोस, त्यसका लागि मैले कहाँ सहयोग गर्न पर्छ म तयार छु,’ उनले भने । उनले प्रतिष्ठानले सेवा बिस्तार र चिकित्सा शिक्षाका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि सबै कुरामा स्थानीय समुदायको सहयोग लिएर काम गर्न समेत सुझाव दिए
। उनले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ बाट जनतालाई बचाउनका लागि प्रतिष्ठानले सधै ढोका खुल्ला राख्नुपर्ने समेत बताए । त्यस अवसरमा प्रतिष्ठानका बारेमा प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारी, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. सागर पन्थी, प्रतिष्ठानका डिन डा।बसन्त लामिछानले प्रतिष्ठानले दिने सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी उनले बुधवार नै कोरोना बिशेष अस्पताल बेलझुण्डीको निरीक्षण गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन प्रदशे सरकार सतर्क रहेको बताए ।